दशैं धमाका : पल्सर १२५ को बिक्री सुरु मासिक ६ हजार रुपैयाँ किस्तामा
हालै मात्र कम्पनीले ल्याएको नयाँ योजनामा यो मोटरसाइकल ग्राहकले विभिन्न तीन स्कीममा खरिद गर्न सकिने छ । कम्पनीले नगद छुट, शून्य प्रतिशत व्याज तथा २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट जस्ता स्कीम रहेको छ । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यो मोटरसाइकलको मूल्य २ लाख २४ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ । ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर किन्दा ग्राहकले यो मोटरसाइकलमा १२ हजार नगद छुट प्राप्त गर्ने छन् । दुई बर्षको अवधिमा किस्ता चुक्ता गर्नु पर्ने यो योजनमा १६ प्रतिशत व्याज लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यसको मासिक किस्ताको बारेमा बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यसैगरि शुन्य प्रतिशत व्याजदरमा मोटरसाइकल खरिद गर्दा ग्राहकले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तै ग्राहकले बजाज पल्सर १२५, २० प्रतिशत मात्र ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
डाउन पेमेन्ट गरेर समेत खरिद गर्न सक्नेछन् । यो योजनामा ग्राहकले मोटरसाइकल खरिद गर्दा बाँकी रकम २ बर्ष भित्र तिर्नु पर्ने हुन्छ । यो योजनमा ग्राहकले १७ प्रतिशत व्याजदर तिर्नु पर्ने छ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
Previous एकसाथ संसार भर किन बन्द भए ! फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप
Next कति हुन्छ नेपालमा सरकारी शिक्षककाे तलब ? नयाँ तलब स्केल (सूचीसहित)